Nhau dzemutambo webhodhi: Nemitambo yemashanga kumapuraneti asingazivikanwe - Spielpunkt - Bhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Nhau dzemutambo webhodhi: Nemitambo yemashanga kumapuraneti asingazivikanwe
Yakatumirwa ne Jonas Dammen | Apr 29, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau
Muparidzi weCologne Strohmann Games anozivisa imwe nzvimbo yechiGerman yezita rakabudirira remutauro weChirungu. Zuva chairo rezvitsva harisati razivikanwa. Anenge makore maviri chaiwo apfuura, vhezheni yeChirungu yakapfuura nemushandirapamwe wakabudirira kwazvo wekuunganidza mari, wakakwanisa kuzadzisa chinangwa chayo pazuva rekutanga.
Mitambo yeStrohmann yaita shuviro yavo kuunza mitambo yemitauro yekunze yakatowana mhinduro yakanaka mumutambo wepasi rose mushanduro dzemutauro wechiGerman. Kazhinji, idzi ishanduro dzakapihwa rezinesi nevaparidzi vekune dzimwe nyika, dzinoburitswa serudzi rwe "mashanga" kunharaunda inotaura chiGerman. Chiziviso chichangoburwa chinofanira kuita kuti mwoyo yesci-fi uye mafeni emuchadenga akurumidze kurova. Kwapera mutambo wa2021 Mhiri kweZuva wechipiri muchadenga mutambo kuStrohmann Mitambo. Yekutanga Kickstarter mushandirapamwe zvakare Planet Hazvizivikanwe yakaunganidza kanopfuura ka14 pane yakatarwa.
Gadzira pasi rakanakisa
Nyika iri kupera zviwanikwa uye vanhu vanofanirwa "kufamba". Kuongorora kwekutanga kunoratidza mapuraneti matanhatu angave akakodzera kukoloni. Basa revatambi nderekugadzirira pasi ravo nenzira yakanakisa uye kuita kuti hupenyu huvepo pano. Kudhirowa panguva imwe chete kwema polyominoes kunobvumira mutambo wekukurumidza uye kunowedzera kupindirana.
Ichi chiitiko chinotangawo kutenderera mushure mekunge mutambi wekutanga atenderedza nzvimbo inotenderera kusvika painoda. Wese munhu parizvino ane mataira enzvimbo anoenderana nenzvimbo yavo yekutamba yavainayo. Saka pane nguva dzose matiles maviri akasiyana ekusarudza kubva. Iyo tile yakasarudzwa inofanirwa kuiswa maererano neyakakura "yechinyakare" yekuisa mitemo (padyo, hapana inopindirana, nezvimwewo). Kuiswa kwega kwega kwe tile kunoita kuti mamaki ezviwanikwa zviviri zve tile zvienderere mberi. Imwe neimwe yemabhawa mashanu inounza akasiyana mabhenefiti. Kana iyo yakaiswa tile ine meteorite chiratidzo, imwe yeaya "nyika" ipapo ipapo. Izvi zvinodzivirira zvibodzwa zvemutsara nekoramu yepasi pavari.
Mutambo unopera kana munhu asingakwanise kuisa chero mataira kubva kuchikamu chechiteshi pamberi pavo. Neimwe nzira, mutambo unopera kana chikamu chechiteshi chinopera matiles. Mitsara nemakoramu akazadzwa zvizere mapoinzi akakosha zvichienderana nemenduru anoratidzwa padivi pavo. Pamusoro pezvo, kune mapoinzi echinzvimbo pamabhawa akasiyana, ezvinhu zvakaunganidzwa kubva pasirese, zve "Civ makadhi" uye yekuzadzisa makadhi ebasa anoratidzwa. Sezvinotarisirwa, munhu ane zvibodzwa zvakawanda ndiye anohwina.
Mutambo uyu unokurudzirwa kune vanhu 1-6 vane makore gumi zvichikwira. Nekuda kwezviito zvakawanda zvinoitwa panguva imwe chete, nguva yekutamba inogara yakatenderedza 10 maminetsi.
Mindclash Mitambo AN08 Zvishandiso * 58,30 EUR tenga
Kare Trivia Murder Party 2 inopedza Jackbox Party Starter
Inotevera Twilight Empire: Roll uye Nyora iri kuuya
Makwikwi epasi rose evechidiki: matarenda emutambo wechidiki anodiwa
Kunakidzwa nekuuraya: tactical kupfura semitambo yebhodhi
Purple Haze: Vietnam Hondo nyaya bhodhi mutambo